Home Wararka 8 Febraayo 2021 Ma naga dhammaan Doontaa Beenta MW Farmajo?
8 Febraayo 2021 Ma naga dhammaan Doontaa Beenta MW Farmajo?
Muddo afar sano oo dhadhow waxaa la nooleyn been iyo marin habaabin aan laga xishoon. MW Farmajo waxaa la hubaa inuu yahay shakhsi aad u xun oo aan runtii lahayn damiir wax xisaabiyo, waayo qofka muslimka ah ee haddana hogaanka uu rabbi u gartay waxaa lagama maarmaan ah inuu yahay qof runta sheegi kara oo waxkasta oo uu sheegayo ay yihiin waxaa uu ujjeedo oo run ah laga leyahay si loola dhaqmo hogaamiyahaas.
Madaxweynnaha mar waliba waa uu marin habaabiyaa shacbiga iyo dadka shaqada la wadaaga waayo waxaa uu markaas farayo ama uu galayo oo heshiis ah laguma xisaabtami karo inuu fulinayo. Waa xaalad adag oo runtii dhib ku ah dadka Somaliyeed guud ahaan iyo dhammaan waddamada deriska ah oo ay Somalida la nooshay.
Haddii aad dib u daawatid dhamaan muuqaalladii laga duubay waxay u muuqdaan inuusan xusuus lahayn oo uu yahay qof ay ka tirmeen markii uu ballamadaas galayey iyo markii uu waxaas shegayey. Haddaba Somaliyey sidee xil loogu aamini karaa qof noocaas ah oo uu dal dhan u hogaamin karaa mar kale? Wax Alla wixii uu shalay ka cabanayey ayuu sameynayaa, wax Allah wixii shalay uu lahaa waa khalad ayuu dhex mushaaxayaa, wax Alla wiixii uu ballanqaaday midna kama fulin, waana iimaan la’aan dhaxalsiineysa saaxibkeeda diin la’aan.
Waxaana halkaasi imaanaya mar haddii hogaanka ummadda uu intaan ku sifoobay oo uusan xataa tagin Masaajidka Madaxtooyada ku yaalla oo guriga u jira wax ka yar 50 taallo sow in diintiisa laga shakiyaa ma keeneyso sida dadnimadiisa looga shakiyo.
Halkaan hoose waxaa ku qoran Tweet uu sameeyey wax yarka hor intii uusan noqon Madaxweynaha Somaliya.